Carlos Arniches. Nna ukwu nke farce na acid ọchị. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carlos Arniches M gaara emezu taa 152 afọ. Alicante a bu otu n’ime ndi ode akwukwo ha ka mma ịmata Madrid na ndụ ya akụkọ ndụ site na ndị nsọ, ụdị nke ọ na-enweghị onye ga-adaba ya. Ọ rụkọtara ọrụ dịka ihe omumu ya na ndi oti egwu di nkpa mara operettas. N'ime ọrụ ya ndị bara ụba enwere aha ndị ama ama Miss Trévelez, bụ nwoke m, enyi Melquiades, Ihe nkiri, Di m na-abịa! Taa, m napụtara ụfọdụ iberibe ha.
Arniches bịarutere Madrid mgbe ọ dị afọ 19. Ọ rụrụ ọrụ dị ka odeakụkọ na Barcelona. Ma otu oge na Madrid ọ banyere ụwa nke ihe nkiri ahụ site n'enyemaka nke onye egwu a ma ama, bụkwa onye Alicante. Ruperto Chapi.
Ọ bụ onye ọkà n'ịtụgharị uche na Madrilenian omume na ihe malitere site na zarzuela na sainetes abụ dị ka Onye nsọ nke Isidra. Ihe ịga nke ọma ya dugara ya ịrara onwe ya nye na ọkwa.
Na ikuku ọdịnala na njirimara njirimara Arniches ekwurula okwu banyere ụlọ ma ọ bụ okwu siri ike karị. Ihe na-esi na ngwakọta nke ihe abụọ ahụ pụta mgbe ụfọdụ na ihe grotesque na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, acidity.
Ọ bụ ụkpụrụ a na - emeghachi ugboro ugboro: enwere odide abụọ na-emegiderịta onwe ha (ezigbo obi na obi ọjọọ, nwoke dị umeala na onye na-arụsi ọrụ ike na onye ọzọ na-emegbu mmadụ na ọtụtụ egbugbere ọnụ), enwerekwa Nwanyị mara mma ma ihe nzuzu na agadi nwoke, bara uru ma na-echebe. Arụmụka ndị nwere ezigbo asusu ma n’ikpe-azụ ha na-enwe mmeri mgbe nile ezi, ịhụnanya na ime ihe n'eziokwu a na-emekwa ndị ọjọọ ihe ọchị.
Mana, ewezuga ntụrụndụ, Arniches chọkwara ịkatọ mmadụ ikpughe ụkpụrụ agbagọ nke oké ọchịchọ ma ọ bụ ihu abụọ, megidere Universalkpụrụ niile, dị ka ezinụlọ, ịkwụwa aka ọtọ ma ọ bụ ịhụnanya. Nke a sitere na ikekwe aha ya kacha mara amara Chibuzo Ibekwe, Ọ na-eje ozi imechi oge ncheta nke Maazị Arniches.
MEE AB TWOỌ, SENE V
Numeriano (ndị Galán); mgbe ahụ Florita abanye.
NUMERIAN. (Ọ na-ada nke ọma na bench.)
- Oh Chineke! Ọfọn; Anọghị m na-ehi ụra, na-eri nri, ma ọ bụ na-ebi ndụ ruo ụbọchị iri na ise ... Ma mụ onwe m, onye na-akwụbeghị ụgwọ penny, aghọọla onye aghụghọ! ... Maka na n'etiti nkịta abụọ ahụ na Marco, nke m na-akwụ ụgwọ Nke nta, abụ m ọkara ụgwọ. Lee obere foto!… Don Gonzalo kpọrọ ya "ntụpọ", mana quia. Ọ ka ukwuu. La Mancha na La Alcarria, ha niile. Etinyeghi m ihe kariri rịbọn gburugburu ya ma o wulitela m dollar iri abụọ na ise! ... Oh, m na-arịa ọrịa, enweghị m obi abụọ. Enwere m isi ọwụwa, ahụ erughị ala, spasms ụjọ; n’ihi na e wezuga ihe ndị a niile, nwanyị ahụ na-agba m ara. O bu mbuli elu, oke iwe na ihe jogburu onwe ya. Ma mgbe ahụ o nwere ụfọdụ ntụnye ... Yesnyaahụ ọ jụrụ m ma m gụọ akwụkwọ akụkọ akpọrọ "The First Kiss", ma agụbeghị m ya, mana ọbụlagodi na m maara ya n'obi ... Thosemụ njakịrị ndị ahụ, ee e! Na elu ya niile, ọ na-ekwu okwu na ndị dị otú ahụ a cloying lexicon na iji kwekọọ ya na m na-acha oji. Lee m na-agbara ya ọsọ ... N'ebe a, ọbụlagodi obere oge, enwere m onwe m pụọ n'ọhụ ahụ jọgburu onwe ya, site n'ọhụụ ahụ ...
FLORITA. (Site n'iwepu alaka ya na ala nke isi iyi a, o n showsomi onu ya).
NUMERIANO (na-ebili na nnukwu itu ukwu. Aside.)
- Horn!… Ọhụụ!
- Adored Naume.
NUMERIAN. (Na nhụsianya.)
FLORITA (na-apụ, na-ele ya anya.)
- Ma olee otú icha mmirimmiri! Are bụ agba! Youjọ na-atụ gị?
- Ọ bụrụ na ha gbaa ọbara, ha agaghị enweta mkpụkọ.
- Ọfọn, m, na-awagharị, na-aga site n'otu akụkụ nke akwa ifuru ahụ gaa na nke ọzọ na-achọ gị.
- M na-awagharị; ma dị umengwụ karịa gị, a nọdụrụ m nwa oge ịnụ ụtọ onwe m na ntụgharị uche nke abalị dị jụụ na kpakpando! ...
- Oh Oh! ... Ọfọn, m na-achọ gị.
- Ọfọn, ọ bụrụ na m maara na ị na-achọ m, m swearụrụ iyi na m na-agba ọsọ, na m na-agba ọsọ izute gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Carlos Arniches. Nna ukwu nke farce na acid ọchị.
Tommy na Tuppence: Achọpụta Achọpụtaghị Agatha Christie.